Hôngria : Ireo Blaogin-tsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2008 0:30 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, Español, Italiano, 日本語, हिन्दी, Français, English
Ary satria efa herinandro sisa tsy ihavian'ny Global Voices Citizen Media Summit izay hotanterahina any Bodàpestà, rehefa avy nampahalala anareo bebe kokoa momba ireo blaogy mivoy mikasika ireo sakafo Hôngroa vitsivitsy izahay dia mitodi-doha kosa amin'ny blaogin-tsary Hôngroa indray. Maro izy ireny ary samy tena lafatra avokoa ka izay santionany ihany no hatolotra etoana.
Heverina fa ny Budapest Daily Photo no blaogin-tsary malaza indrindra mikasika an'i Bodàpestà, olona iray ihany no mivoy azy sy ity blaogy The Budapest Guide [toro-làlana momba an'i Bodapesta]. Azo tsidihina avy amin'ny alalan'ny vohikala tahirin-tsary Flickr koa ireo sary nalainy.
Ireo sary roa apariaka eto amabany dia nosintonina avy tamin'ny Budapest Daily Photo, ilay ankavia dia St Lázsló (Masindahy Ladislasy | Saint Ladislaus) :
Ny sary ankavanana kosa dia hazo toro-làlana izay nalaina tao amin'ny vohitra János any Bodà [FANAMARIHANA : vohitra roa mifanatrika i Bodà sy i Pestà izay fototry ny renivohitra Bodàpestà ankehitriny].
Ny blaogy Explore Hungary izay ahitana lahatsary sy lahapeo, dia manapariaka sary avy amin'izay dia nalehany matetika, ka ny farany tazana ao dia vokatry ny famangiany ny trano fitehirizana-vakoka Mofo-mamy massepain na marzipan Szamos any Szentendre. Manana raki-tsary ao amin'ny vohikala Flickr koa izany mpivoy izay izay ahitana sary maron'i Hôngria sy i Bodàpestà, toy ity iray ambany ity rindrina ivelan'ny trano iray ao Bodàpestà.
Ny blaogy Ervin Sperla's photoblog dia ahitana sary mahatsikaikin'i Bodàpestà vitsivitsy, toy ity iray ambany ity izay ahitana ny fanorenana ny tetezana vaovao iampitana ny ony Danube. Afaka vangiana avy amin'ny alalan'ny tahirin-tsariny Flickr ireo sary rehetra mikasika ity fanamboarana tetezana ity.
Blaogintsary kanto hafa iray koa ny Naked Eye [maso mitanjaka], izay nakana ity sary ambany ity izay ahitana fiara [Amerikana] Impala ao afovoan'ny tanana'i Bodàpestà. Ireo sary farany napariany dia ahitana sary nalainy avy tamin'ny teknôlojia tsotran'ny “lavaka paingotra” [Sténopé | pinhole camera], sy sary roa mampiseho ny sakafo Hôngroa roa antsoina hoe Lecsó.
Dimi's Fotolog kosa dia manapariaka sary miloko na mainty sy fotsy momba izay fiainana andavan'andro any Bodàpestà, toa misambotra sy memtraka an-tsary ireo fotoan'ny fiainana andavan'andro tsotra anefa marina. Io sary io ambany io dia notsongaina avy tamin'nireo sary nalainy kisendrasendra.
Blaogin-tsary hafa mahaliana koa ny an'i Andrey's, izay ahitana sary maro nalaina tamin'ireny Café any Bodàpestà ireny, toy ity tsary iray ambany ity.
Blaogin-tsary Hôngroa maro hafa koa no azo vangiana avy amin'ny alalan'ny vohikala Aminus3, izay mpampiantrano blaogin-tsary raitra. Ohatra amin'izany ny mpivoy Flmstrp izay manapariaka sary ahitana fiainan'ny olona anatiny sy ivelan'ny tanana'i Bodàpestà, na koa sarin'ny tanàna nalaina tamin'ny alina toy ity sary iray ambany ity.
Ary hoan'ireo izay mbola tsy afa-pon'ireo blaogin-tsary ireo fa mbola mitady sary hafa mikasika an'i Hôngria dia afaka mikatsaka anivon'ny Manomboka eto i Hôngria ao amin'ny vohikala Flickr izy ireo, izay ahitana sary toy ity ambany iray ity, ny Seranan-dalambin'i Keleti any Bodàpestà.